Tag: b2b xogta | Martech Zone
Tag: xogta b2b
Talaado, Maarso 23, 2021 Talaado, Maarso 23, 2021 Douglas Karr
Waxaa jira dad badan oo xirfadlayaal suuqgeyn ah oo halkaa ka jira kuwaas oo si adag uga soo horjeeda iibsashada liisaska sahaminta. Waxaana jira, dabcan, sababo aad ufiican oo sababta: Oggolaanshaha - rajooyinkan ayaanan doorbidin codsiyo adiga lagaa doonayo sidaa darteed waxaad halis ugu jirtaa sumcaddaada adoo ku been abuuraya. U dirista emayl aan lagarab istaagin ma jabineyso shuruucda CAN-SPAM ee Mareykanka ilaa iyo inta aad leedahay qaab ka bixitaan… laakiin wali waxaa loo arkaa inay tahay dhaqan hoos ah. Tayo - waa jiraan
Markii aan bilaabay safarkayga shirkadeed ee hirgelinta horumarka joogtada ah, hal raadis oo la jaanqaaday hagaajinta geeddi-socod kasta wuxuu ahaa wax-qabad la'aan - iyo fursad ku xigta - gacan-ka-hadal. Tobaneeyo sano ka dib waxaanan arkaa inay tani xitaa run ka tahay hay'addeenna. Mid ka mid ah tusaalayaasha ayaa ah marka macaamiisheennu ay ku soo wareegaan safkooda Marka go'aan-qaadaha isbedelo, badiyaa xiriirka xiriirka macaamilku wuxuu ku jiraa halis. Waxba kuma jabna sida aan u fiicanahay
Sannad kasta, xaddiga lacagta lagu maalgeliyo istiraatiijiyadda suuqgeynta waxyaabaha u muuqda inay sii kordhayaan. Gaar ahaan, suuqgeeyayaasha mawduucyada 'B2B' waxay raadinayaan inay kasbadaan wacyiga sumadda, jiilka hoggaaminta, helitaanka macmiilka iyo daacadnimada, taraafikada websaydhka, iyo iibka iyaga oo adeegsanaya waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Maaddaama ay suuqyayaashu si aad ah ugu xeel dheer yihiin xeeladaha ay u adeegsadaan inay ku qaybiyaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin, xeelado noocee ah, barnaamijyo, iyo isbeddello ayaa soo galaya faa'iidooyinka ugu badan? LinkedIn waxay la midoobeen MarketingProfs iyo Machadka Suuqgeynta Macluumaadka
Axad, Sebtembar 15, 2013 Douglas Karr
Wax yar oo xogtaada B2B ah ayaa dhacay. Zoominfo waxay soo tabinaysaa in 70% dhamaan xogta B2B ay yeelan doonaan hal ama kabadan isbadal sanadka gudihiisa. Wareejinta shaqaalaha, dallacsiinta, soo iibsiga, xiritaanka meheradaha ... dhammaantood waxay hoos u dhigi karaan tayada xogtaada raadinta. Arrimahan xogta waxay sababi karaan dhibaatooyin iibka iyo suuqgaynta labadaba. Iibinta, haddii kooxdaada dibedda ah ay garaacayso ama emayl u dirayaan dadka in aysan meesha oolin, waa waqtigii
Sida ay Darajooyinkaaga Goobtu Runtii U egyihiin
Talaado, Juun 29, 2010 Douglas Karr
Shirkado badan ayaan la shaqeeyaa iyadoo diiradda la saarayo inta badan waqtigooda bogga gurigooda, marin hagista, iyo bogagga xiga. Qaar badan oo ka mid ahi way bararsan yihiin, oo ay ku jiraan suuq-geyn aan loo baahnayn iyo bogag aan cidina akhriyin - haddana weli waxay hubinayaan inay halkaas ka jiraan. Naqshadayaasha iyo wakaaladuhu way fadhiistaan ​​waxayna horumariyaan goobta iyaga oo maskaxda ku haya maamuus weyn oo sida caadiga ah sidan u eg: Waxay rajeynayaan in 'juice juice' ay si habboon uga socdaan inta badan